:: My Little World ::: March 2007
Character and Love of Truth
လူမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့အမှန်တရားကို မြတ်နိုးမှုပဲ ဖြစ်တယ်။ အခြေအနေ အချိန်အခါ နေရာဌာန မရွေး မှန်ရာကိုသာ ပြောဝံ့တဲ့ သတ္တိရှိရမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/30/2007 05:00:00 PM2comments
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် နဲ့ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်က မယ်တော်ဆေးခန်း ဆို မြန်မာ့အရေး စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း၊ နိုင်ငံရေးမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ လူမှု့ ရေးလုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း ကြားဖူးမှာပါ။ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု့ တွေနဲ့မယ်တော်ဆေးခန်း အကြောင်းတွေကို အင်တာနက် သတင်းတွေမှာ အမြဲတွေ့ နေရပါတယ်။ လေးစားစရာကောင်းလှတယ်။
ခေတ်ပြိုင်မှာ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ် တင်ထားတာ တွေ့ လိုက်လို့အားလုံးလည်း ဖတ်ကြည့်နိုင်အောင် ဒီမှာ သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပြီးတော့ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် အကြောင်းနဲ့သူရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု့ တွေအကြောင်း ပိုသိရတာပေါ့။ အများအကျိုး ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေ အကြောင်းဖတ်ရ၊ ကြားရတာတိုင်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ချီးကျူးမိတယ်။ အဲ့လို လုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုလည်း လေးစားမိတယ်။ ကျွန်မတို့ ဆို သူတို့ လို မလုပ်နိုင်ဘူးလေ။
မယ်တော်ဆေးခန်း ရဲ့ သတင်းတွေ၊ လုပ်ဆောင်မှု့ တွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင် Mae Toe Website မှာ သွားဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်... အဲ့ဒီမှာ လွတ်မြောက်ရေးနယ်မြေမှ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ စုစည်း ထုတ်ဝေတဲ့ နိုင်တင်ဂေး ကျန်းမာရေး ဂျာနယ်ကို Zip Files တွေနဲ့ တင်ပေးထားတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အချိန်ရရင် သွားဖတ်ကြည့်ကြပါ။
DrCynthiaMaung.pdf (Size 2.55 MB) Download
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် (သို့ မဟုတ်) အရိပ်ကောင်းသောသစ်ပင် - စိုးနေလင်း
Mae Tao Clinic (မယ်တော်ဆေးခန်း)
Nightingale Health Journal ( နိုက်တင်ဂေး ကျန်းမာရေးဂျာနယ်)
Labels: Book, Myanmar, WebSite
Posted by Nay Nay Naing at 3/29/2007 02:13:00 PM2comments
မောင်ဝံသရေးတဲ့ သတင်းစာဆရာနှင့် တန်းဖိုး ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးထဲက သတင်းစာ ဆိုတာ၊ သတင်းစာ ဆရာဆိုတာ ဘာလည်းဆိုပြီး ရှေးရှေးတုန်းက ဆရာကြီးတွေရဲ့ အဆိုအမိန့် တွေနဲ့အဲ့ဒီအဆိုအမိန့် တွေကို ဖတ်ပြီး တွေးမိတာလေး တချို့ ပါ။
"သတင်းစာဟာ တရားစာမဟုတ်မှန်း လူတိုင်းသိသပေါ့။ ဒါပေမယ့် အတင်းတွေ၊ အဖျင်းတွေ ကြားချင်ရင် ငါးစိမ်းတန်းသွားမှာပေါ့။ ပိုက်ဆံတောင် မကုန်ဘူး။ သတင်းစာ နှင့် အဖျင်းစာကို မခွဲခြားတတ်တာ သတင်းစာဆရာတွေအစား ကျွန်တော်ဖြင့် ရှက်တယ်ဗျာ"
"သတင်းစာ ဆရာကောင်းသည် အရေးကြီးသော သတင်းများကို ပြည်သူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ပြု ထိုစိတ်ဝင်စားမှု့ ကို အင်အားအဖြစ် အသုံးချကာ တိုင်းပြည်တွင် လိုအပ်သော ပြုပြင်ရေးနှင့် ကြီးပွါးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသည်။"
"သတင်းစာ ဆရာသည် အမှန်တရားကို အလေးထားသော တစ်နေ့ သမိုင်းပြုစုသူဖြစ်သည်။"
" ငါဘုရင်မကောင်းလျှင် မကောင်းသလို ငါ့ကိုရေး၊ မိဖုရားတွေ မကောင်းလျှင် မိဖုရားတွေကိုရေး၊ သားတော်သမီးတောတွေ၊ မင်းညီမင်းသားတွေ နည်းလမ်းမကျလျှင် မကျသလိုရေး၊ လွှတ်တော်တရားသူကြီးတွေ လွဲမှားလျှင် လွဲမှားသလိုရေး၊ မင်းတို့သတင်းစာမှာ ဘာမှအပြစ်မရှိစေရ။ နန်းတော်တွင်းကို သတင်းစာတိုက်က လူတွေဝင်စေ၊ ထွက်စေ၊ အတားအဆီး မရှိစေရ။"
ကဲ့ရဲ့သင့် ကဲ့ရဲ့၊ ချီးမြှောက်သင့် ချီးမြှောက်
သတင်းစာဟူသည်မှာ အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့... ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ဟုတ်မှန်သော အကြောင်းကို ကြားသိ နားလည်မမျှ ပုံနှိပ် ရေးသောစာ၊ သတင်းစာဆရာ၏ အကြံအစည်ပေးနည်းနာ၊ အမှားမမှန်ကို ဖော်ပြသောစာ၊ သတိပေးနှိုးဆော်စာ၊ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်သင့်သည်ကို ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင် ချီးမြှောက်သင့်သည်ကို ချီးမြှောက်သောစာများ ဖြစ်သည်။
ဟံသာဝတီ သတင်းစာ (၁၉၀၁ သြဂုတ် ၂၄)
သတင်းစာများသည် အဖျက်ခေတ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အပြုခေတ်တွင်ဖြစ်စေ ပေါ်လစီခေါ် ၀ါဒနှင့် ကာလာခေါ် အသွေးအရောင် ရှိကြရန် အရေးကြီးပေသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ ရေးချင်ရာရေးနေသော သတင်းစာတစ်စောင်သည် ဖေတော့မောင်တော့ ရေးနေခြင်းဖြင့် ဖတ်ပြီး စွဲကောင်းစွဲမည်ဖြစ်သော်လည်း သြဇာညောင်းမှုကား ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ တိကျသော ၀ါဒဖြင့် ရည်မှန်းချက်၊ ဦးတည်ချက်အတိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန်သွားသော သတင်းစာသည် သြဇာတိက္ကမ ရှိလာမည်သာဖြစ်သည်။
အကျိုးဖြစ်မှု ၊ ရည်သန်ပြု၍
ပြည်သူ့ ကိစ္စ၊ အဓိကထား
ဒါတွေဖတ်ပြီး စဉ်းစားမိတယ်.. ကျွန်မတို့ ခေတ်နဲ့့ကတော့ ပြောင်းပြန်ပါပဲ။ ကျွန်မတို့ ခေတ်က သတင်းစာတွေဖတ်လို့ပြည်သူအကျိူးပြု သတင်းအမှန်တွေကို မတွေ့ ရနိုင်ပါဘူး။ ဈေးထဲ သွား၊ ငါစိမ်းတန်းသွားရင်ကမှ သတင်းမှန်တွေကြားရနိုင်ပါသေးတယ်။ သတင်းစာတွေမှာ အစိမ်းရောင်ဝတ် လူတွေရဲ့ ဟိုသွားဒီသွားနဲ့သူတို့ က သူများရေးပေးတာ စာရွက်ကြည့်ဖတ်ကြားတဲ့ ပွဲတွေအကြောင်း အဓိကပါတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ အရင်ခေတ်က သတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းဆိုတာ လူတွေအဓိကဖတ်တဲ့ အရာပါ။ ခုခေတ် သတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကတော့ လူတွေ မဖတ်ပဲ ကျော်သွားတဲ့ နေရာဖြစ်နေပါပြီ။ နောက်ပြီး သူများ အတင်းအဖျင်း မကောင်းပြော၊ အဆင့်မရှိတဲ့ ၆ ကော်ကံပြည့်၊ တခါတရံမှာ နောက်မျက်နှာတွေ အထိတောင် ကူးသွားတတ်တဲ့ ဆောင်းပါအမည်ခံ အော်လံဖားတွေရဲ့ စာတွေကပါ ပါသေးတယ်။ ဒီခေတ်သတင်းစာတွေမှာ ပြည်သူအကျိုးရှေးရှု့ ပြီး အမှန်အတိုင်းရေးမယ့် သတင်းစာဆရာကျင့်ဝတ်ကို နားလည်တဲ့ သတင်းစာဆရာတွေ ရေးသားခွင့်မရတာ ကြာလှပြီလို့ ဆိုရမယ်။
ပြည်သူ့ အကျိုးပြုသတင်းတွေပဲ ရွေးဖတ်မယ်ဆိုရင် ခုခေတ် ခြောက်ကော်လံ စာမျက်နှာ ၂၀ ရှိတဲ့ သတင်းစာတစ်စောင် ပြီးအောင် ဖတ်ဖို့၅-၁၀ မိနစ်တောင် အချိန်ယူမယ် မထင်ဘူး။ ခုခေတ်မှာလည်း သတင်းစာဖတ်တယ်ဆိုတာ နာရေးသတင်း၊ မင်္ဂလာဆောင်သတင်း နဲ့တခါတလေ ကြော်ငြာချက်တွေဘာတွေ ဖတ်ဖို့ လောက်သာ အသုံးဝင်တာပါ။ ဒီခေတ် သတင်းစာတွေအကြောင်း ကောင်းတဲ့အချက်ကို ရှာပြရမယ်ဆို ပြောစရာ မရှိပေမယ့်၊ မကောင်းတဲ့ အချက်တွေသာ ပြောနေရမယ်ဆို ပြီးတော့မှာကို မဟုတ်ပါဘူး။ တွေးမိတယ် ... ခုနေများ သိပ္ပံမောင်ဝနဲ့သတင်းစာဆရာတွေများ အသက်ရှင်နေသေးရင် ဒီခေတ်သတင်းစာတွေနဲ့ခုခေတ်သတင်းစာတွေမှာ ရေးနေကြတဲ့ သတင်းစာဆရာ အမည်ခံပြီး စစ်အစိုးရ အလိုကျ ကြိုးဆွဲရာ ကနေကြရသူများ ဘာများပြောလေဦး မလဲ။
Labels: Myanmar, Notes, Thoughts
Posted by Nay Nay Naing at 3/28/2007 10:22:00 AM0comments
ဒီနေ့ဟိုအရင် ၂ နှစ်ကျော်က ဆော့လေ့ရှိတဲ့ Flash Game Website တစ်ခုကို ပြန်တွေ့ တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် email က တဆင့်ပို့ ပေးလို့ ရခဲ့တဲ့ HTML File ကတဆင့် သွားပြီး ဒီ Site က Games ကစားလေ့ရှိခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း Computer ထဲက File တွေရှင်းရင်း အဲ့ဒီ HTML file ကိုပါ Delete လုပ်လိုက်တော့ ဆက်မကစားဖြစ်တော့ပါဘူး။ မှတ်မိသေးတယ်။ အဲ့ဒီ HTML File Name ကိုက MorningSunshine ပါပဲ။ မနက်မိုးလင်း အိပ်ရာနိုး အချိန်ရရင်၊ စာဖတ်ရတာ ပျင်းလာတယ်ဆိုရင်၊ စိတ်တွေရှုပ်လာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့ထားပြီး စိတ်ပြန် တည်ငြိမ်ချင်တယ် ဆိုရင် Desktop ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ အဲ့ဒီ File လေးဖွင့်ပြီး Flash Games တွေ ကစားလေ့ရှိတယ်။
PC Game ဆို ကျွန်မက Strategy Games တွေကြိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီလို့Game သေးသေးလေးတွေ ကြိုက်တယ်။ အရင် ၁၀ တန်း အောင်ပြီးစကဆို StarCraft ကို တော်တော်စွဲစွဲမြဲမြဲဆော့ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသွားတက်တဲ့ အထိဆော့တုန်းပါပဲ။ နောက်ပိုင်းတော့ အချိန်ကုန်လို့အဆော့ဖြစ်တာကြာပါပြီ။ နောက်ပိုင်းတော့ ခု Website က game မျိုးတွေ နဲ့Yahoo and MSN က Game အသေးလေးတွေပဲ ဆော့ပါတော့တယ်။
Morning Sunshine မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်က ကျွန်မ အမြဲ ဆော့လေ့ရှိခဲ့တဲ့ Games တွေရှိပါ။
ဒီ Game က ဟိုအရင်စာအုပ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေမှာ တွေ့ ဖူးတဲ့ အတိုင်း ကောင်းလေးတွေ သူကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးအိမ်ရှေ့ ညသန်းခေါင် သီချင်းသွားဆိုတဲ့ ပုံစံလေးပါ။ နောက်ခံ သီချင်းသံလေးကိုလည်း ကြားနေရတယ်။ အိမ်ပေါ်က ကောင်မလေးက ဂစ်တာကိုင်ပြီး သီချင်းဆိုနေတဲ့ ကောင်လေးကို နှင်းဆီပန်း နီနီလေးတွေ ချပေးတယ်။ အဲ့ဒီ နှင်းဆီပန်းလေးတွေကို မိအောင်ဖမ်းနိုင်ရင် အမှတ်တိုးတယ်။ ဒီ Game ထဲမှာ အပြင်မှာလိုပဲ.. ကောင်လေးဆိုတဲ့ သီချင်းသံရဲ့ ဆူညံနားညည်းမှု့ ကို သည်းငြီးမခံနိုင်တဲ့ အိမ်နီးခြင်းတွေက ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ပစ်ပေါက်ပြီး အားပေးကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းတွေကို မထိအောင် ရှောင်ရပါတယ်. ထိသွားရင် အသက်သေသွားလိမ့်မယ်။ တစ်ခါဆော့ရင် ၃ ခါ သေခွင့်ပေးထား ပါတယ်။
ဒါလေးလည်း ချစ်စရာလေးပါ။ ၀က်ဝံလေးက Bunny လေးတွေ ခြင်းနဲ့ လိုက်ဖမ်းရတာပါ။ ခုန်ပြီးလာတဲ့ Bunny လေးတွေကိုဆို Bear လေးကို အဲ့ဒီ Bunny လေးအောက်တည့်တည့်သွားပြီး ခုန်ပြီး ဖမ်းရပါတယ်။ ရှေ့က သွားတိုးမိရင်တော့ အသက်လျှော့မှာပေါ့။ လျှံကိုင်လာတဲ့ Bunny လေးတွေကိုတော့ ဝေးဝေးရှောင်ပေါ့။ သူတိုကိုသွားထိရင်လည်း အသက်လျှော့သွားမှာပါပဲ။
Friend Always Stick Together
ကျွန်မ ဒီ Game နာမည်လေးကို သဘောကျတယ်။ ပုံလေးတွေကလည်း ချစ်စရာလေးတွေပါ။ ယုန်ကလေးက လိပ်ကလေးကို ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး သွားနေတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ပါ။ ယုန် နဲ့ လိပ် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ပေါ့။ လမ်းလျှောက်နှေးတဲ့ လိပ်ကို ထမ်းပြီး ယုန်က လမ်းလျှောက်တယ်၊ အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ လိပ်ကလေးက လေးခွနဲ့ ပစ်ပြီး အပင်ပေါ်က ပန်းသီးတွေကို ခြွေပြီး အတူစားကြတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အသီးမှည့်က ပိုပြီး အမှတ်ရပါတယ်။ မြွေ တွေ နဲ့ငှက် တွေကို အန္တရယ်ကို ရှောင်ရပါသေးတယ်။ ယုန်လေးက ထိုင်ပေးပြီး အပေါ်က လိပ်လေးက တုတ်လေးနဲ့ရိုက်ပြီး တယ် မြေပြင်ကလာတဲ့ မြွေတွေကို သတ်ရပါတယ်။ ကောင်ကင်ကလာတဲ့ ငှက်တွေကိုတော့ လိပ်က လေးခွနဲ့ ပစ်ပြီး သတ်ရပါတယ်။
Hungry Spiders (ဒီGameကစားပြီးရင် ပင့်ကူမြင်ရင် လက်နဲ့ တောက်ထုတ်ချင်စိတ် ပေါက်တယ် )
Chicken Wings are not for Flying (ကြက်တောင်ပံက ကြော်စားဖို့ ပါ။ :D)
တခြား Games လေးတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ အပျင်းပြေ သွားဆော့ကြည့်ကြပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 3/24/2007 01:52:00 PM2comments
ချင်းတွင်း မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ဖတ်မိတဲ့ ဆောင်းပါး " စိတ်ကို အစားကျွေးမယ့် ဗေဒါလေးများ - ကိုပေါက် " ထဲက စာသားတွေပါ။ Hyacinths to Feed the Soul by Carol Amen (R.D April 70) ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ထားတာပါလို့ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါလေးထဲမှာပါတဲ့ ကဗျာလေးကို ကျွန်မ အရင်ကတည်းက ဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်။ အဲ့ဒီကဗျာဖတ်တုန်းက ရေးထားတာတွေကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ၁၃ ရာစုက ရေးထားတဲ့ ကဗျာဆိုတော့ သုံးထားတဲ့ English ကိုနားမလည်တာပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက Simple English နဲ့ပြန်ရေးထားတာကို Google အားကိုးနဲ့ရှာဖတ်မှပဲ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်သွားပါတယ်။ ခုဖတ်မိတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ မြန်မာလို့ဘာသာပြန်ထားပေးတာပါ ပါတယ်။
- Sheikh Muslih-uddin Saadi Shirazi,
The Gulistan of Saadi, 1270
and buy White Hyacinths to feed my soul."
"If you have two loaves of bread,
sell one and buyahyacinth to feed your soul."
ဘ၀ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ချို့ တဲ့နေပြီး
သင်၏ တင်းကုပ်ထဲမှာလည်း စားစရာနှစ်ခုတည်း ကျန်ပါစေ။
တစ်ခု ရောင်းချရသမျှကို စိတ်အစာကျွေးရန်
ခုဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးထဲက ကျွန်မ သတိထားဖတ်မိတဲ့ စာသားတချို့ ...
" ကျွန်မ လူတွေကို သတိထားကြည့်နေတတ်သည်။ တစ်ခါလာလည်း စားဝတ်နေရေးတွေချည်းပဲလား။ လှရာရာလေးတွေရွေးကာ နှလုံးသား အာဟာရကို ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ကြသူများရော မရှိကြတော့ဘူးလား။"
" ကျွန်မတို့ဝမ်းခေါင်းများ ဟာနေသောအခါ ဆာလောင်မွတ်သိပ်လာကြ၏။ နှလုံးသားအာဟာရ ငတ်မွတ်နေသည်ကိုမူ မည်သူမျှ မသိကြချေ။ သည်လိုနှင့် မနက်ဖြန်တွေ၊ မနက်ဖြန်တွေက တရွေ့ ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားကြ။ ရသမျှတွေကလည်း ပေါင်မုန့် ထဲ၊ ဖိနပ်ထဲ၊ အိမ်ခန်းထဲ ၀င်ရောက်သွားကြ။ နှလုံးသား နံရံကြီးများမှာတော့ ဟာလာဟင်းလင်း။ သည်အဖြစ်မျိုး ကြုံရပါပြီတဲ့။ ဘာလုပ်ကြမည်နည်း။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မတို့ ဗေဒါပန်းများ ၀ယ်လို့ ရပါသည်။ "
Posted by Nay Nay Naing at 3/24/2007 11:46:00 AM 1 comments
ခုရက်ပိုင်း အလုပ်နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းလေး...
ဟိုနေ့ က post တစ်ခုမှာ Dewy ရဲ့ comment က သီချင်းစာသားလေး
"..life isaroad that I wanna keep going..."
We have to move on since we've started it! Until that time........
ကို သဘောကျသွားပြီး လိုက်ရှာနားထောင်ဖြစ်သွားတာပါ။
* Thank alot Dewy :)
Disney - Anastasia - At the Beginning (Richard Marx - Donna Lewis)
Posted by Nay Nay Naing at 3/23/2007 11:27:00 AM0comments
ပြီးခဲ့တဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်က ကျွန်မရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ Window Vista Install လုပ်ဖြစ်သွား ပါတယ်။ Vista စပေါ်ထဲက သွင်းမယ် စိတ်ကူးနေခဲ့ပေမယ့် OS တစ်ခု ပြောင်းသွင်းရင် ကိုယ်သုံးနေကြ၊ လိုမယ့် Software တွေ ပြန်သွင်းရင် အချိန်ကုန်မှာ တွေးပူနေတာရယ်.. အလုပ် မအားတာရယ်နဲ့ခုမှပဲ သွင်းဖြစ်သွားတော့တယ်။
အစက Window Vistaကို ခုမှပေါ်တဲ့ OS အသစ်လည်း ဖြစ်တာရယ်... Licensed Version ရမှာ ရယ်ကြောင့်သာ သွင်းကြည့်လိုက်တာပါ။ အသစ်ဆို စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Priated Version ကိုတော့ မသုံးချင်ပါဘူး။ Microsoft က ထွက်တဲ့ OS တွေဆို သူက ထုတ်လိုက် သူများက breakလုပ်လိုက် သူက fix ပြန်လုပ်လိုက် နဲ့ ဆိုတော့ Licensed Version သုံးမှ Update အမြဲ လုပ်နိုင်တာမို့သုံးရတာ အဆင်ပြေ ပါတယ်။ Priated Version သုံးရင် အကောင်ကိုက်ခံရဖို့ ပိုလွယ်တယ် ထင်တယ်..
Window Vista မှာက ပိုဆိုးပါတယ်။ အရင် Microsoft Windows တွေတုန်းက ကိုယ့်စက်မှာ Installation လုပ်ပြီး Activation မလုပ်ပဲ သုံးလို့ ရပေမယ့် ခု Window Vista မှာတော့ မရတော့ပါဘူး။ Installation လုပ်ပြီး၊ ရက် ၃၀အတွင်း Activation လုပ်ရ ပါတယ်။ မလုပ်ရင် ရက် ၃၀ ကျော်တာနဲ့ တချို့Functions တွေ အလုပ် မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဟိုတလောကတောင် Window Vista ကို National CD မှာ ၀ယ်ပြီး သုံးကြတယ့် သူတွေ၊ ရက် ၃၀ ကျော်ရင် သုံးလို့ မရတော့ဘူးဆိုပြီး ပြောနေသံတွေကြားရပါသေးတယ်။ ခု ကျွန်မ ကွန်ပြူတာမှတော့ Window Activation လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
Vista သွင်းတုန်းက စစသွင်းခြင်း Network Cardကို မသိလို့ ကျွန်မ အတော်လေး အလုပ်ရှုပ်သွားရသေးတယ်။ တော်ပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ ကွန်ပြူတာသုံးပြီး Driver ကို အင်တာနက်မှာ ရှာပြီး Install လုပ်မှ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ ပထမ Sound Card ရော Network Card ပါ အလုပ်မလုပ်တာပါ။ အင်တာနက်လည်း ရရော Sound Card က အလိုလို အဆင်ပြေသွားတယ်။ Vista က စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ဟာတွေကို ကျွန်မ Driverရှာပေးစရာ မလိုပဲ Auto Install လုပ်သွားတာပါ။ အရင် Window XP သုံးတုန်းက ကျွန်မ Computerက တချို့Hardware တွေအတွက် Driver သတ်သတ်ရှာပြီး သွင်းရသေးတယ်။ ခုတော့ မလို့ တော့ပါဘူး။ ဒီတစ်ခုတော့ သဘောကျမိတယ်။
Vista က Hardware Requirement က အရမ်းများတယ်။ ကျွန်မထင်တာတော့ Graphic Card တောင်းတာ များတယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မ့ကွန်ပြူတာမှာ Window Experience Index Score ကို ကြည့်လိုက်တော့ Rating 2.0 ပဲ ရှိတယ်။ ဘာလို့ လည်းသေချာကြည့်တော့ Graphics မှာ နည်းနေတာပါ။ အင်တာနက်မှာ လိုက်ကြည့်တာ ကျွန်မကွန်ပြူတာနဲ့ကျန်တဲ့ Specifiaction တွေ အတူတူလောက်ရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာ၊ ဒါပေမယ့် က Graphic Card Memory 256 ရှိတာဆို Rating 4.0 ကျော်ကျော်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မလည်း Rating လေးတော့ ကောင်းစေချင်ပေမယ့် Graphic Card Memory 256 or 512 ရှိတာ ထပ်ဝယ်ပြီး၊ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ 128 ကို လွှတ်မပြစ်နိုင်ဆိုတော့ 2.0 နဲ့ ပဲ ဆက်သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Rating 2.0 ပဲ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် Window Areo Feature ရပါတယ်.. ဘာရယ်တော့မဟုတ်ဘူး Vista က တခြား Windows တွေ နဲ့သုံးရတာ အတော်လေးကွာခြားတယ်၊ ပြီးတော့ အဲ့ဒီ Areo Feature ကြောင့် ကြည့်ရတာ အရမ်းလှတယ် ထင်မိတယ်။ Frame လေးတွေက အရောင် ကြည်ကြည်လေးတွေ။ ခုမှ စသုံးလို့ သာ အချို့ ဟာတွေက အရင် Windows တွေနဲ့မတူလို့တမျိုးဖြစ်နေတာ နောက်ပိုင်းတော့ အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်ပါတယ်
ဒီမှာက ဘဘောခ့်တွေကိုကြည့်ထားတာ... ဒီ Feature လေးသဘောကျလို့ပါ။ Microsoft Window မှာ ခု Vista မှ အဲ့ဒီ Features တွေပါပေမယ့် Linuxမှာအဲ့ဒီ တွေရှိနေတာကြာပါပြီ။ Vista က Frame လေးတွေက ကြည်တာပဲ ရှိသေးတယ် Linux မှာက Frame ကိုကိုင်ပြီး လိုက်ရင် လှုပ်တုတ်လှုပ်တုတ်နဲ့ ရွှေ့ သွားသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Windows က ကိုယ်သုံးနေကြ OS ဖြစ်တော့ နည်းနည်းအားပေးလိုက်ဦးမယ် ....
Microsoft က Window Vista ကို ၄ မျိုး ထုတ်ပါတယ်။ Home Basic, Home Premium, Business နဲ့Ultimate Version တွေပါ။ ကျွန်မ့ ကွန်ပြူတာမှာ ခု Install လုပ်ထားတာ Business Version ပါ။ အဲ့ဒီ Editions တွေမှာ ဘာ Features တွေပါလဲ၊ ဘာတွေကွာလဲ နှိုင်းယှဉ်သိချင်ရင် ကြည့်ရလွယ်အောင် လင့်ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Related Link : Microsoft Window Vista ,
Window Vista : Compare Editions
Posted by Nay Nay Naing at 3/22/2007 07:12:00 AM4comments
Your Tax or Your Passport - Today News
ဒါနေ့ ထုတ် Today သတင်းစာ ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာပါတဲ့ Your Tax or Your Passport .. - Jasmin Yine ဖတ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့လက ရန်ကုန်မပြန်ခင်လေးတင် ဒီနိုင်ငံက မြန်မာသံရုံးမှာ အခွန် ၂ နှစ်စာ သွားပေးလိုက်ရတာကို သတိရတယ်။ ရှာထားသမျှ ပိုက်ဆံကုန်သွားတာပါပဲ။ တကယ်တော့ ဘယ်ပေးချင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် မပေးရင် အိမ်ပြန်လို့ မရနိုင်တဲ့ အတွက် မပေးချင်လည်းပေး ရတော့တာပေါ့။ ဒီနိုင်ငံမှာ မြန်မာသံရုံးကို လခရဲ့ ၁၀% ကို အခွန်အဖြစ်ပေးချင်လွန်းလို့ ပါဆိုပြီး ပေးနေသူ တစ်ယောက်မှ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ passport အသိမ်းမခံနိုင်ကြလို့ သာ.....
ကျွန်မ အလုပ်မှာ ကျွန်မတို့မြန်မာတွေဟာ စင်္ကာပူအစိုးရကို Tax ပေးရယုံမက မြန်မာ အစိုးရကိုလည်း လခရဲ့ ၁၀ % ပေးရသေးတယ်။ Double Tax ပေးရတဲ့ အကြောင်းပြောပြတော့ အလုပ်က လူတွေက မယုံဘူးတဲ့။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ခုတော့ သူတို့ ကို ဒီနေ့ ထုတ် Today သတင်းစာပြပြီး Myanmar တွေ Double Tax ပေးရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက် ပါတယ်။ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။ ကြားရတာကတော့ အဲ့ဒီပွဲကို မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို ဖိတ်ပေမယ့် မအားလို့ မလာဖူးပြောတယ်တဲ့။ မအားလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ မလာရဲတာပဲနေမှာ။
ဒီကိစ္စအတွက် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူများ အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။ အမှန်တရာ ဖေါ်ထုတ်ရဲတဲ့ သတ္တိကို ချီးကျူးပါတယ်။ ဒီက မြန်မာ အားလုံးကိုယ်စား ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ အောင်မြင်ကြပါစေ။
ဒီသတင်းကို ဖတ်ဖြစ်အောင် သတင်းပေးတဲ့ ကိုအော့နဲ့ ပီစပိရစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Avoidance of Double Taxation - Blog
Avoidance of Double Taxation - Yahoo Group
Double Tax and Me - N3
Labels: Myanmar, News, Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 3/21/2007 11:40:00 AM2comments
ဒီကဗျာကို ဘာသာပြန်ထားတာ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာတွေ့လို့ ကူးချထားတာ။ ဒီထက် ကောင်းကောင်း ဘာသာပြန်ထားတာလေး ရရင်လိုချင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာသာပြန်မရတော့ ဘာသာပြန်တတ်သူများ ရေးပေးရင် ကောင်းမယ်..... ခုတော့ ရှိတာလေးပဲ တင်ထားလိုက်တော့တယ်...
Robert Frost, published in 1916 in his collection Mountain Interval.
နှစ်သွယ်လမ်းကို ပြိုင်တူမလှမ်းနိုင်လို့ဝမ်းပါးရသေးတယ်၊
ကွယ်... ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့၊ မတ်တတ်ရပ်ပြီး မျက်စိတစ်ဆုံးလှမ်းမျှော်ကြည့်၊
အဲ့သည်လမ်းကလေး ချုံပုတ်တွေအောက် ကွေ့ ကောက်ဝင်သွားတဲ့ ဆီအထိ။
နောက်တော့ သာတူညီမျှဖြစ်အောင် နောက်တစ်လမ်းကို အကဲခတ်ကြည့်၊
သူကတော့ သာယာမှုအပြည့်နဲ့ညွတ်နူးစွာလက်ကမ်း၊
ခြေလှမ်းတွေကို ငံ့မျှော်နေတဲ့ မြမြက်ခင်းစိမ်းတွေအပြည့်၊
တစ်ခုတော့ရှိသပေါ့၊ သည်လမ်းကို ဖြတ်ရင်
ဖြတ်သူလည်းပန်း မြက်လည်းနွမ်းမှာ အသေအချာပင်။
အဲသည်မနက်မှာ အဲသည်လမ်းနှစ်မြွှာ ငြိမ်သက်စွာလဲလျောင်းလို့ 
အနင်အချေမခံရသေးတဲ့ ရွက်ကြွေတွေ ဖြန့် ခင်းလို့ ၊
ငါ ပထမလမ်းကို နောက်နေ့ အတွက် ချန်ထားလိုက်တယ်၊
တစ်လမ်းလျှောက်မိရင် နောက်လမ်းတွေဆီ ခရီးပေါက်မယ်ဆိုတာသိကာထား
ငါပြန်လမ်းမှ ရှိပါဦးမလား သံသယတောင်ဝင်မိသေး။
သည်အကြောင်းကို ငါသက်ပြင်းကြီးကြီးချပြီး ပြောပါရစေ
အဲ့သည်ရွေးချယ်မှုက အရာရာတိုင်းကို ထူးခြားမှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့ကွယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/17/2007 03:10:00 AM2comments
သံသရာရေစီးထဲမှာ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
ညက ဒီသီချင်းလေး နားထောင်ဖြစ်ရင်း ဟို... ကျောင်းတက်တုန်းက အချိန်တွေကို သတိရသွားတယ်။ ဒီသီချင်းတွေကို မကြာခဏ နားထောင်ဖြစ်တုန်းက အချိန်တွေ.... ကျောင်းတော်ကြီးရယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေရယ်. အထူးသဖြင့် Morrell Hall မှာ နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ... Gispy Lane မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့တာတွေ... အများကြီးပါပဲ.....
ရေး - ဆောင်းဦးလှိုင်
ဆို - ဇော်ဝင်းထွဋ်
အချိန်တန်ရင် ထွက်ခွါသွား ရထားတစင်းထဲ
လူဆိုတဲ့ ခရီးသည်တွေ အဆင်းအတက်နဲ့ 
သံသရာရယ် စက်ဝိုင်း တစ်ခုလိုပဲ
ဒါဏ်ရာတွေ ရှုပ်ပွကာ အသည်းကြွေမှ
လူတွေဟာ ဘ၀အသိ မှန်ရတော့မှာလား
အရှေ့ ဖက်ဆီ ရောင်နီဦး အလင်းရောင်သန်းလုပြီ
သံဝေဂများစွာ ဒီလူ့ ဘ၀
အမှောင်နဲ့အလင်းရဲ့ ကိုယ့်အသည်းကြား
ရင်ထဲရှိတယ် သီချင်းလေး အဆုံးမသတ်တော့
နွေဂိမာန် ၀ဿန်မိုးစက် ဟေမန်နှင်းထဲ
မွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းကြား
အချိန်နဲ့တို့ ကမ္ဘာလည်ပတ်မှု့ မ ရပ်သရွေ့ တော့
Posted by Nay Nay Naing at 3/16/2007 11:28:00 AM0comments
ကျွန်မ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းတွေက စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ကြက်သားမစားနဲ့ရန်ကုန်မှာ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ရှင့်။ သူတို့ သာ စိုးရိမ်နေတာ... ကျွန်မတို့ရန်ကုန် မြို့ တော်ကြီးမှာတော့ အေးဆေးပါပဲ။ အဲ့ဒီ မနက်ကတင် ကျွန်မ ကြက်သားဟင်းနဲ့ထမင်းစားလိုက်သေးတယ်လေ... ကျွန်မလည်း အိမ်ကိုပြောလိုက်တယ် ကြက်သားမစားပဲ နေလိုက်ကြဦးလို့ ။ အိမ်ကလူတွေက ငါတို့ တောင်ဒီသတင်းမသိဘူး.. နိုင်ငံခြားက သူတွေက ဘယ်လိုသိရတာလဲတဲ့။
စစ်အစိုးရက သူတို့ သူတို့ သတင်းကလွဲရင် တခြားဘာသတင်းမှ ထဲ ထည့်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ တခြား သတင်းတစ်ခုကို မထည့်မဖြစ် ထည့်ရတော့မယ်ဆိုရင်တောင် သတင်း အမှန်အတိုင်း ထည့်တယ်ဆိုတာ ခုခေတ်သတင်းစာတွေမှာ မရှိဖူးဆိုတာ ကျွန်မတို့အားလုံး သိနေကြတာပါပဲ။ မြန်မာ့ သတင်းစာတွေမှာ သတင်းတွေ မပါတာ၊ သတင်းအမှားတွေ ပါတာကို အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ပြောနေဖို့ တောင် လိုမယ် မထင်တော့ပါဘူး။
နောက်တစ်ရက်ကြတော့ ကျွန်မ့သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး ကြက်သားလုံးဝ မစားပါနဲ့ လို့ ပြောပြန်တယ်ရှင့််။ ကျွန်မ နေတဲ့ နေရာက စိုးရိမ်ရတဲ့ နယ်မြေ၊ ရောဂါစတွေ့ တဲ့ နယ်မြေ နဲ့ကပ်လျက်ပါ။ နောက်ရက်ပိုင်း ကြားရတာတွေအရတော့ မရမ်းကုန်အပိုင်းမှ မွေးမြူရေးခြံတစ်ခြံမှာ ရောဂါစတွေ့ ပြီး သေတဲ့သူတွေရှိတယ် လို့ သိရတယ်။ နောက်ရက်ပိုင်းတော့ သတင်းစာမှာလဲ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါပိုးတွေ့ ရှိလို့မရမ်းကုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်နှင့် တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်တွေမှာ ကြက်ငှက် ရောင်းဝယ်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများကို ကန့် သတ်ထားတဲ့ သတင်းပါလာ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ရောဂါကြောင့် လူသေတဲ့ အကြောင်း မပါပါဘူး။ အဲ့ဒီ သတင်တွေကြောင့် ကျွန်မမှာ စားချင်တဲ့ အစားအစာတွေ မစားလိုက်ရတော့ပါဘူး။
အမေကလည်း အိမ်က လူတွေကို အပြင်မှာ ကြက်သားမစားဖို့ မှာနေတာတွေ့ ရတယ်။ နောက် အမေက ပြောတယ်...တို့တွေသာ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ကြက်သား၊ ကြက်ဥ မစားဘူးဆို လုပ်နေတာ .. ရပ်ကွက်ထဲက တချို့ အိမ်တွေမှာ တော့ ခုရက်ပိုင်း ကြက်သားပဲ ချက်စားနေကြတယ်တဲ့လေ.. အဲ့ဒီ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေး သတင်းကြောင့် ကြက်သားဝယ်သူနည်းပြီး ဈေးတွေကျကုန်လို့ ...အရင်က ကြက်သားဈေးကြီးလို့မစားနိုင်သူတွေက ခုဈေးကျတုန်းလေး စားလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး ၀ယ်စားနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးက ကျက်အောင် ချက်စားရင် စားတဲ့ သူကို မကူးပေမယ့် အစားအသောက် ချက်တဲ့ သူကိုတော့ ကူးနိုင်တာပဲလေ။ အဲ့ဒီကတဆင့် ကျန်တဲ့ သူတွေကိုရော ကူးနိုင်တာပေါ့။ ဒါကို မကြောက်ကြဘူး။ အမေပြောတာ နားထောင်ပြီး ကျွန်မမှာ .... တို့ ဗမာတွေ ကျန်းမာရေး အသိစိတ် နည်းပါးပြီး ဒီလောက်တောင် ငတ်နေကြပြီလား ဆိုပြီးပဲ ၀မ်းနည်းရမလား၊ တို့ ဗမာတွေ သေရမှာတောင် မစိုးရိမ်၊ မကြောက်ရွံ့ ပဲ ရဲရင့်ကြတယ်ဆိုပြီးပဲ ဂုဏ်ယူရမလား... ဘယ်လို တွေးရမယ်မှန်း မသိဘူး ဖြစ်သွားခဲ့ရ ပါတယ်။
ခုရက်ပိုင်း မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် မှာရှိတဲ့ မွေးမြူရေးခြံတွေမှာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး ထပ်တွေ့ ရတယ်လို့ခေတ်ပြိုင်သတင်းမှာ တွေ့ လိုက်ရတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်နှင့် ယခုလဆန်းမှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နှင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တို့ က ကြက်အသေကောင်တွေမှာ တွေ့ ရတဲ့ ရောဂါပိုးကလည်း ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး H5N1 ဖြစ်သည်ဟု FAO နှင့် USAID တို့မှ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များက အတည်ပြုကြောင်း ရေးသားထားပါသေးတယ်။ အသေးစိတ်ကို ခေတ်ပြိုင် မှာ ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ မြန်မာသတင်းစာတွေမှာ လိုက်ရှာကြည့်တာတော့ အဲ့ဒီ သတင်းအကြောင်း၊ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွါးမှု့ တွေ အကြောင်း နောက်ထပ် သတင်းအသစ် ထပ်ရေးထားတာ မတွေ့ ရသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဟိုရက်ကတော့ ကြက်တွေ ငှက်တွေ အကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်. ၁၀ မတ် ၂၀၀၇ ထုတ် မြန်မာအလင်း သတင်းစာ မှာ ပါရှိတဲ့ ...ရန်ကုန်တိုင်းက မြို့ နယ်တချို့ မှာ ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ငှက်တွေ ပျံနေရင်းမြေကျသေဆုံးရတာ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတွေ့ ရှိချက်အဖြေများ ထုတ်ပြန်ပေးတဲ့ သတင်းပါ ။
ဟိုရက်ပိုင်း သတင်းစာတွေမှာ ငှက်တွေမြေကျသေတယ်ဆိုပြီး သတင်းပါလာဖူး ပါတယ်။ (ဒီမှာ ကြည့်ပါ)။ ခုသတင်းမှာတော့ ငှက်တွေ မြေကျသေဆုံးရတဲ့ ဘာရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးရတယ်ဆိုတာပါ ပါတယ်။ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါကြောင့် သေဆုံးတာ တစ်ကောင်မှ မပါ ပါဘူးရှင်။ ... ငှက်တွေ ဘာလို့ မြေကျသေလဲ။ သူတို့ တွေ မြေကျ သေရတာ... အပူရှပ်လို့ ၊ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါကြောင့်၊ အူရောင်ရောဂါ၊ ကျောက်ပေါက်ရောဂါ၊ အဆိပ်လက္ခဏာ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် ပါတဲ့။ တော်တော် ရောဂါများတဲ့ ငှက်တွေပဲနော်..
အင်း... ဒီသတင်းလေးဖတ်ရင်း.. အဲ့ဒီ ငှက်တွေ အားလုံး မြေကျသေရတာဟာ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေး ရောဂါကြောင့် မဟုတ်ဘူး..... လောက်လေးခွစာ မိသွားလို့သေကုန်ကြတာဆိုပြီး သတင်းမထုတ်ပြန်လိုက်တာ တော်သေးတာပေါ့ လို့တွေးမိပါရဲ့ရှင်...
Source : မြန်မာအလင်း သတင်းစာ၊ ကြေးမှုံ သတင်းစာ၊ ဧရာဝတီ အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း ၊ ခေတ်ပြိုင် ဂျာနယ်
Posted by Nay Nay Naing at 3/15/2007 11:47:00 AM0comments
ရနိုင်တာတွေကိုသာ ကျေနပ်တန်ဖိုးထားနေတဲ့ ဘ၀။
ဖြစ်နိုင်တာတွေအတွက်သာ ကြိုးစားနေတဲ့ ဘ၀။
စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကိုသာ အမြဲမှတ်မိနေတဲ့ ဘ၀။
ဖြစ်ချင်တာ အားလုံး အမြဲတမ်း၊ ဖြစ်မနေန်ိုင်မှန်း သိပေမယ့်...
ဘ၀ နဲ့ဆန္ဒ တထပ်တည်းကျချင်တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/13/2007 01:52:00 PM7comments
wxWidgets ဆိုတာ Cross Platforms မှာသုံးလို့ ရတဲ့ GUI တည်ဆောက်တဲ့ toolkit တစ်ခုပါ။ wxWidgets သုံးထားတဲ့ GUI တွေဟာ တခြား ဟာတွေထက်စာရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်။ အင်း.. သူကတော့ native look and feel လို့ပြောထားပါတယ်။ ခက်တယ်.. တချို့ စကားလုံးတွေက ကိုယ့်ဟာကိုတော့ သိပေမယ့် ပြန်ရေးဆို မရေးတတ်တော့ဘူး။ ထားပါ .. wxWidgets အကြောင်း ဆက်ပြောဦးမယ်။
wxWidgets ဟာ Cross Platforms လို့ ပြောထားတာနဲ့ဘယ် platforms တွေမှာ သုံးလို့ ရလဲ သိချင်လို့ရှာကြည့်လိုက်တော့ Windows, Apple Macintosh, Linux/Unix (X11, Motif, and GTK+), OpenVMS နဲ့ OS/2 တွေမှာ သုံးနိုင်တယ်သိရတယ်။ နောက်ပြီး embedded system မှာ သုံးလို့ ရအောင်လုပ်နေတာက under developement လို့ပြောထားတော့ ဒီထက်ပိုပြီး နာမည်ကြီးလာဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
"wxWidgets enablesaprogram to compile and run on several computer platforms with minimal or no code changes." တဲ့.. ကျွန်မတို့ လို software developer တွေ အကြိုက်ပေါ့။ ဘာမှ code တွေပြောင်းစရာမလိုပဲ Platform အကုန်မှာ အဆင်ပြေနေရင် ပိုတောင် ကြိုက်သေးတယ်။ ဘာမှ ရေးစရာမလိုရင် ပိုတောင် ကြိုက်ကြဦးမယ်ထင်တယ်။
wxWidgets က Native AIPs တွေကို ခေါ်သုံးထားတာသိရတယ်။ ဒီလို Native APIs တွေကို ခေါ်သုံးရင် အပြင်အဆင် အဆင်ပြေရုံတင်မက တခြား Custom APIs တွေကို သုံးပြီး ရေးထားတာထက် ပိုလည်း မြန်တယ်။ " wxWidgets code prefers callinganative widget on the platform, instead of reimplementing custom widgets. This leads toafaster, more native looking interface when compared to toolkits like Swing (for Java) "
wxWidgets နဲ့ရေးထားတဲ့ screens shots လေးတွေ ကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီမှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်မ ကတော့ စာတွေ ဘယ်လောက်ရေးပြီး ဘာတွေ ကောင်းပါတယ် ပြောနေနေ.. ပုံလေးတွေနဲ့ဒါကိုသုံးပြီး ဒါတွေ လုပ်ထားတယ် ဆိုတာမျိုးလေး ကြည့်လိုက်ရတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် သွားကြည့်လိုက်ကြပါ။ wxWidgets က Free Open Source Project တစ်ခုပါပဲ။
ဒီမှာကတော့ wxWidgets ကို သုံးထားတဲ့ Software တချို့..
* aMule - 'All-platform' P2P client based on eMule
* Audacity -afree/open source sound editor
* Audiobook Cutter - A user-friendly MP3 audiobook splitter.
* Code:locks - The free/open source, cross platform Free C++ IDE
*e- Collaborative Text Editor for Windows
* Juice (podcasting), an aggregator application that is used to download podcast media files
* Mahogany - An OpenSource cross-platform mail and news client.
* Monolith - tool to distribute copyrighted data
* MUTE - anonymous file sharing
* VLC media player - cross platform multimedia player
Source : wxwidgets.org , wikipedia.org
Posted by Nay Nay Naing at 3/13/2007 11:50:00 AM2comments
XRuby ဆိုတာ Rudy Source Code (.rb) တွေကို Java Bytecode (.class) အနေနဲ့ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး compiler ပါ။ လက်ရှိ stable version ဖြစ်တဲ့ version 0.1.3 က ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်(မတ် ၆ ၂၀၀၇) ကမှ ထွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Ruby က ခု နှစ်ပိုင်းမှာ Hot ဖြစ်လာရုံမကပဲ ခုဆို အတော်များများ ၀ိုင်းပံ့ပိုးနေကြပါပြီ။ ဟိုတလောကတင် NetBean က Ruby နဲ့JRuby ကို Support လုပ်မယ် ပြောတယ်။ Visual Studio 2005 အတွက် Ruby Plugin တွေလုပ်ကြတယ် ( Ruby In Steel) ။ နောက်ပြီး Lunix မှာဆိုလည်း Ruby က Pre-Installed လုပ်ပြီးသား ပါတယ်။ Sun Java ကလည်း Ruby Scripting Langauge ကို တော်တော် သဘောကျပုံရတယ်။ JRuby ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ ခုဆို Google ကလည်း ဒီ Java နဲ့Ruby ပိုအဆင်ပြေအောင်လို့XRuby ကို support လုပ်ပေးတယ်။
Ruby In Steel က ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရမယ်။ JRuby က Free Programming Language ၊ NetBean ကတော့ အစကတည်းက free IDE၊ ခု XRuby က Open Source Project ပါဖြစ်လို့ဝါသနာပါတယ် ဆိုရင် ၀င်တောင်ရေးလို့ ရပါသေးတယ်။
XRuby - http://xruby.com/default.aspx
XRuby (Google) - http://code.google.com/p/xruby/
NetBean adopts Ruby JRuby
Ruby In Steel - http://www.sapphiresteel.com/
Posted by Nay Nay Naing at 3/12/2007 04:00:00 PM0comments
11 March 2007 - Back from Holiday
Posted by Nay Nay Naing at 3/12/2007 10:49:00 AM0comments
တင်မိုး ( ၈၊ ၆၊ ၂၀၀၂ )
ှSource : Burmatoday.net
Posted by Nay Nay Naing at 3/12/2007 10:25:00 AM0comments
USDA Youth ( ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ ဖြိုးရေးအသင်းကြီး - ပြည်သူတွေခေါ်တာတော့ ကြံ့ဖွတ် ) က တင်တဲ့ Myanmar e-Library.. ဒီနေ့ ဆို နေပြည်တော်မှာ အဲ့ ဒီ Myanmar ပထမဆုံး e-Library ဖွင့်ပွဲကြီးကို အကြီးအကျယ်လုပ်မှာလို့ သိရတယ်.. အင်း သူတို့ တွေ အပြောအရတော့ စာအုပ်ကြီးတွေကို0(zero) and 1 (one) တွေ ပြောင်းပြီး အင်တာနက်ပေါ်ကို တင်လိုက်တဲ့ မြန်မာ့ စစ်အစိုးရ အထောက်အပံ့ရ online library ကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ လေ။ This is the first National Online Library System in Myanmar လို့ရေးထားတယ်။
စာအုပ်တွေမှာ download နဲ့read ဆိုပြီး button နှစ်ခုပေးထားတာတွေ့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်အတော်များများ မှာတော့ အဲ့ဒီ button နှစ်ခုမပါသေးပဲ စာအုပ်နာမည်ပဲ e-library book list မှာ ရှိနေသေးတာ တွေ့ ရတယ်။ အင်း.. သူတို့ လည်း ဖွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဖွင့်ပွဲ အမှီ booklist တွေ တင်လိုက်ရတော့ စာအုပ်တွေအားလုံးကို zero one ပြောင်းဖို့အချိန်မမှီလိုက်ဘူးနဲ့ တူပါတယ်။ အဲ့ဒီ နာမည်ပဲ ရှိပြီး ဖတ်လို့့လည်းမရ၊ download လုပ်လို့ လည်းမရသေးတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဘယ်တော့များ zero one ပြောင်းပြီး တင်မလဲ စောင့်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
ရှိနေတဲ့ eBook တွေကို ဖတ်မယ်၊ download လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မန်ဘာ ၀င်ဖို့ တော့ လိုတယ်နော်... မန်ဘာကို ၁ နှစ် အလကား ၀င်ခွင့်ပြုမှာလို့ လည်း ကြားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီ ၁နှစ် ပြီးရင်တော့ ဘာတွေဘယ်လို ဖြစ်မလဲ မသိဘူးပေါ့နော်။ ဘယ်အရာကိုမှ အစိုးမရတဲ့ တရား သဘောလေးကို နားလည်ထားရမယ်လေ။ ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာ member ၀င်မယ်ဆို ဖြည့်ရတာတွေက တခြား web site တွေနဲ့မတူဘူးရှင့်။ ကျွန်မတော့ ဖြည့်ချင်တာ ဖြည့်လိုက်တာပဲ .. diamond member ဆိုလားပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ခုထိတော့ member ၄၀ မပြည့်သေးပါဘူး။ ၀င်ကြည့်ကြပါ။ ဘာတွေရှိနေလည်း သိရတာပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် e-library ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံမှာ ရှိသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ခုလို စာအုပ်နာမည် စာရင်းတွေပဲ ရှိနေမယ့်အစား စာအုပ်တွေပါ တကယ်ရှိလာဖို့ လိုပါတယ်။၊ ရှားရှားပါးပါး စာအုပ်တွေ၊ ခေတ်ပေါ်စာအုပ်တွေ ဝေေ၀ဆာဆာ နဲ့e-library ကြီး ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကောင်းမှာပါပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 3/11/2007 08:53:00 PM2comments
ဒီနေ့ မနက်တော့ လိုတဲ့ အခြောက်အခြမ်းတွေ ၀ယ်ရအောင် ဆိုပြီး သိမ်ကြီးဈေးကို တစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ် ခဲ့တယ်။ အမေနဲ့အတူ ငါးရံခြောက်၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ငါးပုတ်ခြောက်၊ ငရုတ်သီး နဲ့တခြားလိုတာတွေ ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဈေးတွေများ ကြီးချက်ကတော့ မပြောပါနဲ့ တော့။ အမေက ဈေးမေးလိုက်၊ ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်လိုက်တဲ့ ကျွန်မက ဘုရား တလိုက်နဲ့တော်တော်လေး ကုသိုလ်တွေတော့ အတော်ရခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ မှတ်မိသလောက်ဈေးလေးတွေ ပြောပြဦးမယ်..
ငါးရံခြောက်က အကောင်ကြီး ကို ၁၃၀၀၀( သောင်းသုံးထောင်ဈေး)
ငါးပုတ်ခြောက် အချိုခြောက်လို့ ပြောတာပဲ ၂၅၀၀၀ ( နှစ်သောင်း ငါးထောင်ဈေး)
ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် က ၈၀၀, ၉၀၀, ၁၀၀၀ နဲ့၁၂၀၀ ဆိုပြီး အစားစားရှိတယ်..
လက်ဖက်နဲ့စားတဲ့ ရွှေပုဇွန်ခြောက် သေးသေးလေးတွေ အတော်လေးကို သေးတယ်… ၁၇၅၀၀ (သောင်းခုနှစ်ထောင်ငါးရာ ဈေး)
တခြား ပုဇွန်ခြောက်ဈေးတွေ တော့ ဒီမှာသာ ကြည့်ပါတော့…
Posted by Nay Nay Naing at 3/09/2007 08:45:00 AM0comments
ဒီနေ့ မနက် ဘာရယ်တော့ မဟုတ် အတော်လေး စိတ်ပင်ပန်းသွားတယ်။ မီးကမလာ၊ မီးစက်နှိုးပြီး အင်တာနက် သုံးပြန်တော့လည်း ဘာတွေ connection က မကောင်း၊ အင်တာနက်ဖြုတ်ပြီး ဖုန်းတွေ ဆက်ပြန်တော့လည်း “အဝေးလိုင်းများ မအားပါသဖြင့် … ဘာညာဘာညာ … “နဲ့ တိုးလိုက်၊ “လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသော …. ဘာညာဘာညာ .. “ နဲ့ တိုးလိုက်နဲ့ဘယ်ဖုန်းမှ ခေါ်လို့ မရ…. စိတ်များရယ် ညစ်ပါရဲ့… တော်ပြီ ဘာမှ မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီး သီချင်းနားထောင်လိုက်တာ… မျိုးကျော့မြိုင် ရဲ့ လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ အခွေနဲ့သွားတိုးတယ်. ညက ညီမလေး နားထောင်ထားတာနဲ့တူပါတယ်။ ခု စိတ်ရှုပ်နေတာတွေနဲ့သီချင်းတွေနဲ့ခံစားချက်တွေ ထပ်တူကြသွားတော့ အဲ့ဒီ တစ်ခွေလုံးကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖွင့်ပြီး နားထောင်ဖြစ် သွားတယ်… အဟား…. ဘေးအိမ်တွေကလူတွေတော့ တော်တော် နားငြီးသွားမယ် ထင်တယ်…
လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ ...
လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသည့် ဆယ်လူလာဖုန်းမှာ စက်ပိတ်ထားခြင်း ... သို့ မဟုတ် ဆက်သွယ်မှု့ဧရိယာပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့် ခေါ်ဆိုမရနိုင်ပါရှင်...
နေ့ လို့ မရထိုင်လို့ မရ မင်းပေးထားတဲ့ ဒုက္ခ.... .....
သူ့ ကိုတွေ့ ရင်ပြောလိုက်ပါ ဖုန်းဖွင့်ပါဦး။
စိတ်ဓာတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်သွား.... စွဲလမ်းလွန်းတဲ့ ငါ့ရဲ့အမှား...
ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်မရှိတဲ့ ကိုယ့်စိတ်များ ... ဘ၀အတွက် အပြစ်တစ်ခုဖြစ်နေလား...
ပိုးဆိုးပတ်စက်ပြောနေကြ.. ကိုးလိုးကန့် လန့် နဲ့ ဒီဘ၀ ... ဘယ်နေရမှာ အသုံးမကျပါလား...
ခံစားချက်များ မရှိချင်ဘူး... ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိတော့ဘူး..
စိတ်ကူးနဲ့ ရူး မဖြစ်သင့်ဘူး......
မင်းနဲ့ဝေးရင် အရာရာ အမှားကြီးမှားနေ..
ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးတွေ.. တကယ်ကို ၀ိုးတိုးဝါးတား...
မိုင်ပေါင်းက ဘယ်လောက်ပင်ဝေးကွာ .. အိမ်မက်နဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တာ...
ခက်ခဲတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ သာ.. ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ဘ၀တွေ ဝေးကွာ
တစ်နေ့ တော့ တွေ့ ရဦးမှာ... စိတ်ကူးနဲ့ ရူးတဲ့ ကိုယ့်ကမ္ဘာ
သူ့ နား ရှိချင်ပါပြီ... အင်အားများဝေမျှပြီး
အတူရှိမယ့် အချိန်တွေစီ... တကယ်တန်းတ မျှော်လင့်ပြီး
ပြောနေကြတဲ့ စကားတွေရဲ့ အလယ် .. ကိုယ်အရှုံးမပေးပဲ...
အေးဆေးပါ အချစ်ရယ် .. မင်းကလွဲရင်.. ဘယ်သူကိုမှတကယ် မယုံပါဘူး...
အမြဲ ရင်ထဲပြည့်ကျပ်နေလို့ ခံစားရခက်နေလို့ ဒီစိတ်နဲ့ရူးနေလို့
လမ်းမှာတွေ့ရင် ပြောပြပေးပါ သိပ်ချစ်တာကို
ဒါပေမယ့်လည်း အချစ်နဲ့ကင်းဖို့ မကယ်နိုင်တော့လည်း စိတ်တွေလေး
ပူပန်သောက ပူလောင်ဒေါသ မောရတဲ့နေ့တွေဆိုတာ
အချစ်နဲ့တွေ့တဲ့ လူတွေအတွက်တော့ သံသရာတစ်လျှောက်မှာ ရေတွက်လို့မရ
မာနတွေခ၀ါချပြီး အချစ်ရဲ့အောက်မှာ ဒူးတွေထောက်ကြ
ပေးဆပ်ရ ဒီဘ၀ အချစ်ကြောင့်ပဲစိတ်တွေပြောင်းသွား
ဒီစိတ်နဲ့စား ဒီစိတ်နဲ့သွား ဒီစိတ်နဲ့အသက်ဆက်ရှင်နေရပါလား
ခုတော့ မီးလည်း ပြန်လာပြီး၊ အင်တာနက်ကလည်း connect လုပ်လို့ ရပြီ… ဖုန်းတွေလည်း ခေါ်လို့ ပြီးပြီ… လုပ်စရာရှိတာ တချို့ လည်းလုပ်ပြီးပြီ… အင်း……. အားလုံး အဆင်ပြေသွားပြီပြောလို့ ရမယ်… ဒါပေမယ့် မျိုးကျော့မြိုင် သီချင်းတွေကိုတော့ ဆက်နားထောင်ပြီး လိုက်အော်ဆိုနေမိတယ်…
Posted by Nay Nay Naing at 3/07/2007 03:09:00 PM2comments
NetBeans adopts Ruby/JRuby
NetBeans Community Announces Support for Ruby and JRuby Programming Languages...
(05 March 2007..)
Posted by Nay Nay Naing at 3/07/2007 11:17:00 AM0comments
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက ဟိုတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ ပြီး အင်းလျား ခဏ ရောက်ဖြစ် ခဲ့တယ်။ သူတို့ တွေနဲ့မတွေ့ တာ အတော်ကြာပြီလေ။ သူတို့ တွေကို ကြည့်ပြီး အံ့သြသွားမိတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ နေပြီး စိတ်တွေ အရမ်းချမ်းသာနေကြတယ်နဲ့တူပါတယ်။ ပြောလိုက်ကြသေးတယ်၊ ဒီနိုင်ငံလောက် နေလို့ ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံမရှိဘူးတဲ့။ ဟုတ်မှာပါ။ သူတို့ ကိုကြည့်ပြီး သူတို့ ပြောစကားကို ကျွန်မ ယုံကြည်သွားပါတယ်။ :D
ဘလောခ့်လာ မိတ်သဟာတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်များ တနင်္ဂနွေ ညနေ ၄ နာရီက ၆း၃၀ နာရီ အကြား .. အင်းလျား ကန်စောင်းက စားသောက်ဆိုင်တန်းကို ရောက်ခဲ့ကြရင် ဆူညံစွာ စကားပြောနေတဲ့ ဒီသုံးယောက်ကိုများ မြင်မိလိုက်ကြပါ သလား။
ရန်ကုန်မှာနေပြီး စိတ်ချမ်းသာပြီး လှနေသူများ
ဟို.... အဝေးက သူငယ်ချင်းတွေ သူတို့ ကို .. မမှတ်မိကြမှာစိုးလို့.... ၃ ယောက်လုံးကို တန်းစီခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံအတင်း ရိုက်ခဲ့လိုက်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ အလွန် လှပ ခန့် ညားနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပုံပါ။ စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/06/2007 09:57:00 PM0comments
ဒီနေ့ဂဏန်းဟင်း အိမ်မှာချက်တယ်။ အဲ့ဒီဟင်းကို ကျွန်မ ချက်တာလို့ မထင်ပါနဲ့ ၊ ကျွန်မရဲ့ တစ်ဝမ်းကွဲ အစ်ကို ချက်တာပါ။ ကျွန်မ က သူ့ ကို ဘာကူလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ … ဟင်းလည်းကျက်ရော စားပြီး ကောင်းတယ် ပြောပေးလိုက်တယ်လေ။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက် ဟင်းချက်တဲ့ အခါမှာ သူ့ ကို အထိရောက်ဆုံး ကူညီနည်းကတော့ ဟင်းကျက်တဲ့ အခါ ကုန်အောင်စားပြီး “ဟင်းချက်ကောင်းလိုက်တာ၊ အရမ်းစားလို့ကောင်းတာပဲ… နောက်လည်း ထပ်ချက်ကျွေးဦးနော်..” ဆိုတာမျိုးလေးတွေ ပြောပေးတတ်ဖို့ပါပဲ။ :D ဟင်း ချက်နေတုန်း ကူလုပ်ပါလို့မပြောရင် သွားမကူပါနဲ့ ။ အဲ့လို ဟိုကူဒီကူလုပ်ပေးတာဟာ တခါတလေ သူတို့ ကို ကူညီရာ မရောက်ပဲ အနှောက်အယှက်ပေးသလိုတောင် ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ (မယုံရင် ကျွန်မ့ သူငယ်ချင်းတွေ မေးကြည့်ပါ။) ကျွန်မက အစ်ကို့ ကို ကူညီချင်ပေမယ့် သူကတော့ ကျွန်မ မီဖိုထဲ မလာ အေးရောလို့ထင်သလားမသိဘူး.. မီဖိုထဲမလာနဲ့့ ညှော်နံမယ် ဟင်းကျက်မှသာလာ စားပါတော့လို့ပြောခဲ့လို့အဲ့ဒီ ဟင်းကျက်မှသာ စားပြီး အထိရောက်ဆုံး ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ဂဏန်းဟင်း ဘယ်လို ချက်သလဲဆိုတာ ကျွန်မ မသိပါလိုက်ပါဘူး။ သိချင်ရင် ကျွန်မ့ အစ်ကို ကို
မေးကြည့်ပါ။ :D.. သူပြောတာတော့ ဂဏန်းဟင်းချက်ရတာ အရမ်းမြန်တယ်။ တကယ်လည်း မြန်ပါတယ်၊ ဟင်းချက်တာ ၁၀ မိနစ် လောက်ပဲကြာတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ဂဏန်းကို မချက်မှီ သန့် ရှင်းအောင် လုပ်ရတာရယ်၊ စားရင်း စူးမှာစိုးလို့ဟိုညှပ်ဒီညှပ်၊ ဟိုခွါဒီခွါ၊ ဟိုဖြတ်ဒီဖြတ်လုပ်ရတာသာ ရှုပ်တယ်၊ ကြာတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ဟင်းကျက်ပြီးတဲ့.. စားလို့ရပါပြီ
တစ်ခါစားစာ ဟင်းခပ်ပြီး ကျန်တဲ့ ဂဏန်း
ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးကြောင့် ဘဲကင်စားချင်ပေမယ့် စားခွင့်မရတဲ့ ကျွန်မ၊ ဂဏန်းဟင်းတော့ စားခွင့်ကြုံလိုက် ပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ အရင်ကဆို ဂဏန်းချက်လေ့ မရှိပါဘူး။ ဂဏန်းဆိုတာ အရှင်ကို ၀ယ်ချက်မှ ကောင်းတာ၊ ဆိုင်မှာ ၀ယ်တဲ့ အသေတွေက မကောင်းရင် အဆိပ်ဖြစ်မယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ကြားဖူးနေခဲ့ပြီး၊ အသိအိမ်တွေက ချက်ပြီး လာပို့ မှ၊ ဒါမှ မဟုတ် အပြင်ဆိုင်မှာ စားမှ သာ စားရလေ့ရှိပါတယ်။ ခုတော့ ကျွန်မတို့အိမ်နားက ခြံတစ်ခြံမှာ နိုင်ငံခြားကို ဂဏန်းတွေ ပို့ တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်နေပြီး၊ ဂဏန်းဆို အရှင်မှ နိုင်ငံခြားကို ပို့ လို့ ရတာဆိုတော့ သေသွားတာနဲ့ခြံနီးနားချင်းတွေကို ကြိုသာမှာထားရင် ချက်ချင်းလာပို့ပေးတာဆိုတော့ အစ်ကိုက သူတို့ စီမှာထားပြီး ဒီနေ့ လာပို့ တာနဲ့ဟင်းချက်ကျွေးတာလို့ပြောတာပဲ။ ဒီနေ့ချက်ပေးတဲ့ ဂဏန်းက ၁ကီလို - ၅၀၀၀ ကျပ် ဖိုးလို့ လည်း သိရပါတယ်။ အရင်တခါ ကျွန်မပြန်မရောက်ခင် မှာထားတုန်းက လာပို့ တာဆို အခွံပျော့ ဂဏန်းတွေ အရမ်းစားလို့ ကောင်းတယ်လို့အိမ်ကလူတွေက ပြောတာပဲ။ ခုစားရတာတော့ အခွံမာ ဂဏန်းတွေပါ။ ကိုယ်မချက်ရ အားလုံးစားလို့ ကောင်းတယ် ဖြစ်အောင် ကျင့်နေတဲ့ ကျွန်မ အတွက်တော့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေး သူများချက်ပေးထားတဲ့ ဟင်းစားရတာ အရမ်း စားလို့ကောင်းပါတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲက ထူးထူးဆန်းဆန်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဟင်းချက်ကျွေးလို့ဒီနေ့ တော့ အိမ်မှာချက်တဲ့ဂဏန်းဟင်းကို အ၀စားလိုက်ရတယ် ဆိုတာလေး မှတ်ထားလိုက်တာပါ။ :P
Labels: Diary, Food, Myanmar
Posted by Nay Nay Naing at 3/06/2007 07:15:00 PM 1 comments
ရွှွှေတိဂုံသို့တစ်ခေါက်
ဒီနေ့ မနက် စောစော ဖေဖေ၊ မေမေ၊ ညီမလေး၊ ယောင်းမချောရယ်နဲ့ရွှေတိဂုံဘုရားကို ရောက်ဖြစ်တယ်။ အလုပ်ပိတ်ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ မို့ လားတော့ မသိဘူး၊ ဘုရားပေါ်မှာ လူတွေ အရမ်းများပြား စည်ကားနေတာကို တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ထဲက ရွှေတိဂုံသွားမယ် စိတ်ကူးထားပေမယ့် ညီမလေးက သူနဲ့ မှ တူတူသွားပါဆိုတာနဲ့ညီမလေး အလုပ်အားတဲ့နေ့ ကို စောင့်နေရတာကြောင့် ဒီနေ့ မှ ပဲ ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားဖူးဖြစ်တော့တာပါ။ ဘုရားပေါ်ရောက်တော့ ဘုရားရှိခိုး၊ မေတ္တာပို့ ၊ ချစ်သူခင်သူများ ကျန်းမာပါစေကြောင်း၊ လူသားအားလုံး အေးချမ်းကြစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီး၊ ဘုရားကို လက်ယာရစ် တစ်ပတ်ပတ် ကြည်ညိုကာ ဓာတ်ပုံနည်းနည်းပါးပါး ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို Picasa Web Album မှာ ကြိုးစားတင်ထားပါတယ်။
ဒီပုံက ဘုရားပေါ် အောင်မြေမှာ လူအများအပြား ဘုရားရှိခိုး ဆုတောင်းနေတဲ့ ပုံပါ။ အောင်မြေမှာ ဆုတောင်းရင် ဆုတောင်းပြည့်တယ်၊ အောင်မြင်တယ်လို့လူအများက ယုံကြည်ကြတယ်လို့သိရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအောင်မြေမှာ စုရုံးပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆုလာတောင်းလေ့ ရှိကြသူတစ်ချို့ ကိုတော့ လက်ရှိ စစ်အစိုးရက ဘုရားပေါ်တက်၊ အောင်မြေမှာ ဆုတောင်းခွင့်မပြုတာ ကြာပြီလို့ လည်း သိရှိရပါတယ်။ သြော် ... ကြောက်တတ်လိုက်ကြတာနော်။ နောက်ပြီး ဒို့ှဗမာပြည်ကြီးမှာ ဘုရားပေါ်တတ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တာလေး ဆုတောင်းတာတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆုတောင်းခွင့်မရှိပါလားလို့တွေးမိတယ်..... အင်း ...အောင်မြေမှာ ကျွန်မ စိတ်ထဲက ဆုတောင်းတာတွေများ သူတို့ တွေမကြားနိုင်လို့တော်သေးတယ်ဆိုရမယ်... ကြားများကြားနိုင်ခဲ့ရင် ကျွန်မကို နောက်အကြိမ်တွေမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ် တက်ခွင့် ပြုမယ် မထင်တော့ပါဘူး.....
Posted by Nay Nay Naing at 3/05/2007 11:23:00 AM5comments
Photoshop က ၆ လ အတွင်းမှာ Online Version တင်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ Free ပေးသုံးရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။ ဟိုတခါ ကျွန်မ ရေးဖူးသလိုပဲ နောက်ပိုင်းကြရင် ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲမှာ OS နဲ့Browser ကလွဲရင် တခြား Software သွင်းထားဖို့ မလိုတော့ပဲ အင်တာနက်ရှိရုံ သုံးချင်တဲ့ Software တွေကို အွန်လိုင်းကပဲ သုံးနိုင်တော့မယ် ထင်ပါတယ်။ ကောင်းတာပေါ့၊ Computer ထဲမှာ ဘာမှ မသွင်းထားတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတာပေါ့။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်မှာပဲ သွားဖတ်ကြည့်ကြပါ။
Source :News.Com: Adobe to take Photoshop online
Posted by Nay Nay Naing at 3/02/2007 12:00:00 PM2comments
"သမီးရေ.. မထသေးဘူးလား။ အိပ်ရေးဝရဲ့လား။ ဒီမနက်စာ ဘာမုန့် စားချင်လဲ ပြော။ အပြင်သွားပြီး မစားချင်ဘူးဆို ဖေဖေကို မုန့် ဝယ်ခဲ့ဖို့မှာလိုက်မယ်"..... ခုရက်ပိုင်း နံနက်စောစော ကြားနေရတဲ့ စကားသံတွေပါ။ သြော် ဒီလို အသံမျိုးတွေနဲ့မနိုးထရတာ အတော်ကြာခဲ့ပြီမို့ခုရက်ပိုင်း မနက်တိုင်း ကြားနေရတဲ့ အသံတွေကို တန်ဖိုးထား နားထောင်နေမိတယ်။
နံနက်ခင်းခြင်းတူပေမယ့် ဟိုကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာ ကြုံရတဲ့ နံနက်ခင်းတွေနဲ့အမေ့ အိမ်မှာ ကြုံရတဲ့ နံနက်ခင်းတွေဟာ အတော်လေး ကွာခြားပါလားနော်။ ဟိုနိုင်ငံမှာဆို မနက်မိုးလင်း၊ နိုးစက်မြည်သံကြားတာနဲ့ကြုံးရုန်းထ၊ ရေအမြန်ချိုး၊ အ၀တ်လဲ ပြီး အပြေးအလွှား အလုပ်ချိန်မှီအောင် မနည်းသွားရတယ်။ မနက်စာတောင် လမ်းမှာ ၀ယ်သွားပြီး အလုပ်ရောက်မှ အမြန်စားရတယ်။ တချို့ ရက်ဆို အိပ်ရာထ နောက်ကျသွားလို့မနက်စာ ၀ယ်ဖို့အချိန်မမှီတာနဲ့မစားဖြစ်တဲ့ ရက်တွေကလည်း ရှိသေးတယ်။
ခုများတော့ မနက်ဆို ချိုချိုသာသာလေး အိပ်ရာနိုးမယ့် အမေက နဲ့စားချင်တာ စားဖို့လိုက်ပို့ ပေးမယ့် အဖေက ဘေးမှာ။ မနက် အမေလာနိုးတဲ့ အချိန်မှာ အိပ်ရေးမ၀သေးလို့မထချင်ပါဘူးဆို အမေရေ.. သမီး ဘာမုန့် လေးစားချင်တယ်လို့ပြောပြီး ပြန်အိပ်လို့ရသေးတယ်။ အိပ်ရေးဝလို့နိုးလာပြီဆို စားချင်တယ် ပြောထားတဲ့ မုန့် က အဆင်သင့်ပဲ။ အဲ... အိပ်ရေးဝလို့စောစောထဖြစ်တယ် ဆိုရင်လည်း ဘယ်နားက၊ ဘာဆိုင်က၊ ဘာမုန့် စားချင်တယ်လို့ သာပြောလိုက် စားချင်တာ စားလို့ ရအောင် အဖေနဲ့အမေက လိုက်ပို့ပေးတယ်။ အင်း.. ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်သလဲနော်..
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး နောက်တရက် မနက်စာ သွားစားတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ။ နောက်ရက်တွေ သွားစားတာတွေ တော့ camera ယူဖို့မေ့တာများလို့ဓာတ်ပုံ မရိုက်ဖြစ်ဘူး။
Posted by Nay Nay Naing at 3/02/2007 09:54:00 AM 8 comments
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးထဲက အပြင်လည်း မသွားရ၊ ဘယ်မှ မထွက်ရဆိုတော့ အင်တာနက်နဲ့အဆက်ပြတ်နေပြီး မနေတတ်၊ မထိုင်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မကို မကြည်ရက်တဲ့ အဖေက အိမ်မှာ အင်တာနက်သုံးလို့ ရအောင်ဆိုပြီး Access Kit သွားဝယ်ပေးတာပါတယ်။ နာရီ ၃၀ စာ Access Kit ကို ကျပ်ငွေ ၁၅၀၀၀ ပဲပေးရတာဆိုတော့ သုံးပျော်ပါတယ်။ တစ်နာရီကို ၅၀၀ ကျပ် ကြတာပေါ့။ အပြင်မှာ အင်တာနက်သွားသုံးရင်လည်း ၁ နာရီ ၄၀၀-၅၀၀ တော့ ပေးရမယ် ထင်တယ်။ အရင် တစ်ခါပြန်လာတုန်းက တော့ internet café မှာ အင်တာနက် သွားသုံးဖြစ်ပေမယ့်၊ ခုတခေါက်တော့ တစ်ခါမှ မသွားဖြစ်သေးဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ရရင်တော့ မြန်မာ့ Internet Café တွေမှာ အင်တာနက် သုံးဖူးတယ်ရှိအောင် တစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားသုံးကြည့်ဦးမယ်။ ခုသုံးတဲ့ Access Kit နဲ့Connection လုပ်ရတာလည်း အရမ်းတော့ မခက်ပါဘူး။ Dial Up ဆိုတော့ နေ့လယ်ပိုင်းဆို 34.6 Kbps လောက်ရှိတယ်။ ညပိုင်းဆိုရင်တော့ နည်းနည်း ပိုကောင်းတယ်။ Internet Café တွေမှာတော့ ဒီထက် ပိုမြန်မယ် ထင်တယ်။
မနေ့ က ၀င်ကြည့်သလောက်တော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Site တွေကလွဲရင် တော်တော်များများ ၀င်လို့ရပါတယ်။ Messenger တွေကိုလည်း Website တွေ သုံးပြီး ၀င်လို့ ရနေတယ်။ Blogger ကိုလည်း ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရနေပါတယ်။ Gmail ကိုလည်း ဟိုစမ်းဒီစမ်း လိုက်ရှာလိုက်တာ G-Lite မဟုတ်တဲ့Site တစ်ခုကနေ Gmail ရဲ့ original ပုံစံအတိုင်း ၀င်လို့ရတာတွေ့ရတယ်။ တခုတော့ ရှိတယ် နည်းနည်းတော့ စိတ်ရှည်ရတာပေါ့။ ကောင်းပါတယ်။ အမြဲ စိတ်မြန် လက်မြန်ရှိတဲ့ ကျွန်မ၊ ဒီက အင်တာနက်ကို သုံးနေရင်းနဲ့နည်းနည်းတော့ သည်းခံ စိတ်ရှည်တတ်လာမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား၊ ခုရက်ပိုင်း မီးအမြဲနီးပါးလာနေတယ်။ အရင်ကတော့ အဲ့လို အမြဲမလာဘူး၊ ခုရက်ပိုင်း အတန်းငယ်လေးတွေ စာမေးပွဲဖြေနေကြပြီ၊ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲကလည်း နီးလာလို့မီးပုံမှန်လာနေတာ ဖြစ်မယ်လို့အမေ ပြောတာပါပဲ။
အရင်ကလို့အင်တာနက် အမြဲ မသုံးနိုင်ပေမယ့် ဒီက မပြန်ခင်ရက်ပိုင်းတော့ နာရီ ၃၀ စာ Access Kit ကိုသုံးပြီး အင်တာနက်မှာ ခဏလောက်တော့ ခြေရှုပ်နိုင်ပြီပေါ့။
Posted by Nay Nay Naing at 3/01/2007 10:55:00 PM0comments